UJuan Luis Guerra: I-Dominican Musicer Best-Knowner
Umculi weRiphablikhi eDominican's Best-Known Musician
Ngomhlaba, uJuan Luis Guerra ngumculi owaziwa kakhulu kwiRiphabliki yaseDominican, athengisa iirekhodi ezingaphezu kwezigidi ezingama-30 kwihlabathi jikelele kwaye anqoba ama-Agrarian Grammy angama-18 kunye nama-Grammy Awards amabini ngexesha lohambo lwakhe.
Eyaziwayo njengomvelisi, umculi, umqambi, umbhali wengoma kunye nabo bonke-abajikeleza umculi, uGerraerra ungenye yamagama ahloniphekileyo kumculo wesiLatini . Kanye kunye neBhen 440 (okanye i-4-40), ebizwa ngegama eliqhelekileyo elithi "A" (ii-440 imijikelezo yesibini), iGraerra yavelisa umculo edibanisa i-merengue kunye ne-Afro-Latin fusion izitayela ukuze zenze isandi esiyingqayizivele kuGuerra.
U-Juan Luis Guerra-Seijas owazalelwa eSanto Domingo, eRiphabliki yaseDominican ngoJuni 7, 1957, uGuerra wayengunyana ka-Olga Seijas Herrero kunye nesigama se-baseball esaziwayo uGilberto Guerra Pacheco. Akukho nto eninzi eyayazi malunga nobuntwaneni bakhe bokuqala, ngokubhekiselele kumculo. Enyanisweni, ngokwemfundo yakhe yokuqala yekholejini, kungenzeka ukuba akafumananga italente yakhe yomculo de wayesemncinci.
Xa uGragra aphumelele esikolweni esiphakeme, wangena kwi-Autonomic University yaseSanto Domingo, ebhalisa kwizifundo ze-Philosophy kunye neNcwadi. Ngomnyaka kamva, ukunyaniseka kwakhe okwenyaniso kwacaca kwaye uGuerra wathuthela kwi-Conservatory Music yaseSanto Domingo. Emva koko, wanqoba i-scholarship kwi-College of Music yaseBerklee e-Boston apho wayefunda khona ilungiselelo lomculo kunye nokwakhiwa kwaye wadibana nomfazi wakhe, uNora Vega.
Ukugqiba iikholeji, wabuyela ekhaya waza wafumana umsebenzi njengomqambi womculo kwiintengiso zethelevishini.
Kwakhona wadlala igitare endaweni; Kwakuye ngexesha lala ma-gigs apho wadibana nabalwazi abagqibeleni baba liqela lakhe, i-4-40.
Ngo-1984, iGuerra kunye ne-4-40 bakhululwa i-albhamu yabo yokuqala, "iSoplando." UGuerra wayenomdla kakhulu kwi-jazz, kwaye wachaza umculo ngokuthi "ukuxuba phakathi kweengcamango zesintu kunye neendandlululo ze-jazz." Nangona i-albhamu ayenzanga kakuhle, yakhululwa kwakhona ngo-1991 ngokuthi "I-Original 4-40 " kwaye namhlanje ithathwa njengento yomqokeleli.
Ixesha Elikhulu: Ukutyikitya Ingxelo yeRekhodi
Ngowe-1985, u-4-40 wasayina isivumelwano kunye noKaren Records kunye nokuzama ukufumana i-Guerra eyamkelekileyo yentengiso yatshintsha isimboli somculo ukuze abonise indlela eyaziwayo, eyona nto yokuthengisa. I-Guerra yayiquka iinqununu ze "perico ripiao," uhlobo lwama-merengue olongezelela i-accordion kwi-orchestration engaphezulu kwaye yayivame ukuqhutywa ngokukhawuleza.
Iingoma ezimbini ezilandelayo ezine-440 ezikhutshwe phantsi kwegama zazo zilandelele ifomula efanayo, kodwa ngenxa yokuphakama kwamanani kunye nokuqaphela kunye nokulungelelanisa rhoqo kwi-band, igama leqela liguqule ukuba libenze iGuerra njengomculo ophakathi kunye ne-albhamu yabo elandelayo " I-Ojala Que Llueva Café "(" Ndiyathanda Ngayo Imvula YeCoffe ") yaphuma phantsi kwegama elithi" Juan Luis Guerra kunye ne-4-40. "
Impumelelo ye "Ojala " yalandelwa ngu "Bachata Rosa " ngo-1990, kuthengisa iikopi ezigidi ezi-5 kwaye iphumelele iGrammy. Namhlanje u-"Bachata Rosa" uthathwa njenge-albhamu yesigxina kumculo waseDominican, kwaye nangona uGuerra engekho umculi we- bachata yendabuko, le albhamu yazisa ulwazi lwehlabathi kwiModican uhlobo lomculo owawuncitshiswa kwiRiphabliki yaseDominican ngokwayo ukukhululwa kwayo.
Uhambo lwaseYurophu lwaseGuerra kunye ne "Fogarte"
Ngowe-1992 yabona ukukhululwa kwe "Areito" kunye nokuqala kolwandle lwengxabano kwiqela njengoko i-albhamu igxile kwihlwempu kunye neemeko ezimbi kwi siqithi kunye nakwezinye iindawo ezininzi zaseLatin America.
Abantu belizwe laseGuerra abazange bakhathalele le nguqulelo yethoni esuka kumculo ongapheliyo kumanqaku okuhlalisana, kodwa i-albhamu yamkelwe kwamanye amazwe.
Ngenxa yoko, u-Guerra wachitha loo nyaka uhambela eLatin America naseYurophu, esasazela isigidimi sakhe kunye nenkcubeko kwilizwe lonke, iphupha ayelijonga ngayo ixesha elide lokuphila kwakhe omdala ekuphumeni kwakhe kwisiqithi sasekhaya.
Kodwa ukuhlala endleleni kwakuqala ukufika kuye. Ukuxhalaba kwakhe kwakuphezulu, ukutyelela kwakumbethe phantsi kwaye waqala ukuzibuza ukuba nayiphi na impumelelo yentlekele ukuhlala njengolu hlobo. Sekunjalo, wakhulula "uFogarte" ngo-1994, owaye waphumelela ngokuphumelelayo kunye nokugxekwa ukuba umculo wakhe wawuthathaka.
Ukuthatha umhlalaphantsi kunye nokubuya komKristu
UGuerra wenza amakhonsathi ambalwa ukuphakamisa i-albhamu, kodwa yacaca kwimisebenzi yakhe kunye nokunyuka kokutshintsha kwakhe ukutshiswa.
Ngethamsanqa, wamemezela umhlalaphantsi wakhe ngo-1995 waza wagxininisa ekufumaneni izikhululo zethelevishini kunye nezomathotholo kunye nokukhuthaza iitalente ezingaziwayo.
Kwiminyaka emine yokuthatha umhlalaphantsi wakhe, uGuerra waba nomdla kwaye waguqukela ebuKristwini bamaVangeli. Xa waphuma emhlala phantsi ngo-2004, kwakukuza kubonisa i-albhamu yakhe entsha "iPara Ti," eyayininzi inkolo ngokwemvelo. I-albhamu yenza kakuhle, iqulethe amabhaso amabini eBillboard ngo-2005 we "Best Gospel-Pop" kunye ne "Tropical-Merengue."
Umculo kaGuerra awunamathelisi nje okanye i-bachata kodwa udibanisa iziqulatho ezisisiseko zeDominican kunye namafomu kunye nothando lwakhe lwe-jazz, ip, neshyhym kunye ne-blues-okanye nayiphi na isimboli somculo ebambe umdla wakhe ngesikhashana. Iingoma zakhe ziyingqungquthela, ilizwi lakhe lihamba ngokugqithiseleyo ngomphetho omncinci, ubuchule bakhe bomculo buhlala buqala.
Kwaye kwi-albhamu yakhe entsha, ngo-2007 "uLlave de Mi Corazon," uluhlu lwakhe oluqhelekileyo kunye neetalente libonakaliswe ngokupheleleyo, ebonisa ukuba isandi nomphefumlo weRiphabliki yaseDominican sisaphila kwindawo yomculo namhlanje.
I-Salsa yoLuntu oluLuntu oluBalulekileyo oluHlangayo lwabathandekayo
I-Old Toltec yoRhwebo noQoqosho
Isimemezelo sokuzalwa kukaKristu
Isikhokelo seNcwadi yeJamani